Xulalka – IFIYE
Waxa aan ka mid ahaa dadkii la socday xafladsannadeedkii shirkadda ‘Apple‘ ee ay ku soo bandhigeysay wax-soo-saarkeeda cusub. Laga yaabee in dhacdada ugu muhiimsan ay ahayd soo-saarista aaladdaha Talefoonnada cusub iyo wax-soo-saarka kale. Arrinta kale ee ay shirkaddu sannadkan ku faanayso ayaa ah furitaanka xarunteeda cusub ee ‘Apple Park’ oo ku kacday lacag dhan 5 […]
Waan u han weynaa in uu ku guuleysto jagada madaxtinnimada Soomaaliya. Iyada oo uu tartanku meel culus marayo ayaan ka seexday habeenkaas. Ilaahay mahaddiis, subaxii waxa aan ku soo toosay isaga oo madaxweyne ah. Asxaabteydii wey ii wada hambalyeeyeen. Waxayna igu wada dhaheen: “Ninkan waxaad ku taageertay wax yar maaha e, waannu kula arkaynaa.” Aniga […]
Qofka aan ka hadlaayo waa buunnigii jeclaa afka iyo suugaanta Soomaaliyeed: Borofasoor Bogumil Witalis Andrzejewski (Anjeyafiski), loona yiqiinnay “Macallin Guush,” oo ahaa caalimkii dunida tusay, jecleysiiyayna, suugaanta Soomaaliyeed, misna ahaa aqoonyahan intii ugu badneyd noloshiisa u hibeeyay cilmi baarista afka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Wuxuu ka diyaarshey qoraallo aad u badan illaa uu noqday xarun loogu […]